यौन टेप बाहिरिएका मन्त्रीको रवि लामिछानेको सिधा कुरा कार्यक्रममा स्टिङ अपरेसन [ भिडियोसहित ]
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » यौन टेप बाहिरिएका मन्त्रीको रवि लामिछानेको सिधा कुरा कार्यक्रममा स्टिङ अपरेसन [ भिडियोसहित ]
काठमाडौ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीको यौन टेपको स्टिङ अपरेसन चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेको कार्यक्रम सिधा कुरा वीथ रविमा प्रशारण भएको छ ।
उक्त भिडियो हामीले यहाँ उतारेका छौ । भिडियोमा पहिले प्रहरी कार्यालय महिला उजुरी गर्न गएको भिडियो प्रशारण हुन्छ ।
भिडियोमा महिलाले प्रहरीसँग गएर कुर्मराज शाहीले करणी गरेको बयान दिन्छिन् । प्रहरीले नाम के हो भनेर सोध्छन् उनले कुर्मराज शाही भन्छिन् । प्रहरीले मन्त्री हो भन्दा हो पहिले माननीय थियो अहिले मन्त्री हो ।
भदौ २ गते राति ११ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा पुगेर दिएको बयान र उजुरीको प्रमाणका रुपमा प्रहरीलाई नै उनले मन्त्रीसँगको शारीरिक सम्पर्कको भिडियो पेश गरिन् ।
भिडियोमा मन्त्री शाही र महिलाबीच केही असहमझदारीकाबीच शारीरिक सम्बन्ध भएको नै देखिन्छ । उक्त भिडियो हेर्दापनि प्रहरीले हदम्याद नाघेको भन्दै उजुरी लिन मानेन । बरु प्रहरीले आन्तरिक रुपमा नै मिलाउन सुझाव दिएर फर्काइदियो ।
त्यसपछि महिला र उनका श्रीमानले मन्त्रीसँग कुरा गर्न थाले । रवि लामिछानेको सिधा कुरा कार्यक्रममा उक्त सबै सम्वादहरु श्रीमानले पठाएका थिए ।
त्यहाँ श्रीमानले भनेका छन् एक चोटी त्यो मन्त्रीले मेरो श्रीमतीलाई ल सरी है भनेको भएपनि चित्त बुझाउथे क्या दाई भन्दै सिधा कुराका टिमसँग बोल्छन् । कस्तो श्रीमान होला ?
श्रीमतीलाई करणी गर्ने पुरुषले ल सरी है भन्दा नै सहने ? जे गर्न सक्छन् गर भन्ने त्यसको समस्या के हो बुझ् भन्ने तर उसले अहमता देखायो हैन । आखिर यो देशमा न्याय त होला नी भनेर म लागेको हो ।
महिला विकासबाटपनि गर्न सक्थे अदालतबाटपनि गर्न सक्थे । रवि दाई के खुट्टा छुनुपर्ने केही थिएन । किन रविदाईसँग पुगेको हो भने मैले यो मान्छेले यस्तो गरेको हो भन्ने देशभरी नै पुर्याउनुछ ।
त्यसपछि घटना सार्वजनिक हुन लागेको थाहा पाएपछि मन्त्री शाहीले महिलालाई धम्कि दिन थाले । त्यसपछि महिलाले फेरी जीउ, ज्यानको सुरक्षा र करणीको मुद्धा लिएर प्रहरीसँग गइन् ।
प्रहरी कार्यालयमा पत्रकारसँग उनले मन्त्रीले क्वाटरमा नै करणी गरेको दावी गरिन् । उसको जुत्तादेखि प्याण्टीसम्म धोए । त्यसलाई यति धेरै सेवा गरे । तर उसले मलाई नै यस्तो गर्यो भनेको भिडियो रवि लामिछानेको कार्यक्रममा बजेको छ ।
रवि लामिछानेको टीमले कृषिमन्त्री र महिलाका श्रीमानसँग स्टिङ अपरेसन गरेको छ । स्टिङ अपरेसनको भिडियोमा महिलाको श्रीमानले भनेका छन् उता चै प्रमाण थियो तर अब मसँग कुनै प्रमाण छैन भनेको सुनिन्छ । अरु थप भन्छन् त्यो त मन्त्री ज्युले बसेर ल यति, यति हो मैले लिएको म त्यो गर्दिन्छु त्योपनि त भन्नु पर्यो हैन ।
पत्रकारले त्यो बेलाको कति हिसाब बिग्रिएको छ भनेर सोध्छन् श्रीमानले भन्छन् ८–९ लाख हो । त्यो मन्त्रीले लिएको छ त्यसको जिम्मा मैले लिएको छु । त्योपनि त मैले तिर्नुपर्छ उनले भनेका छन् । छोरी जस्तो मान्छेलाई त्यस्तो गर्नुभयो । माफी मागे छोडिदिने भने ।
उनले म काठमाडौ गएको बेला मन्त्रीले यस्तो गरिरहेको छ भनेपछि प्रमाण चाहिन्छ दाई को मा जा क्यामेरा राख भने । भोलि लड्नका लागि बलियो हुन्छ भनेर रेकर्ड गरेको हो । त्यसपछि पत्रकारहरु त्यो बेलाको भिडियो लिएर मन्त्री शाहीको निवासमा पुग्छन् ।
त्यहाँ पत्रकारले भिडियो देखाउँदै यो त तपाई हो भन्दा हो म हो भन्छन् । उनी महिलाको कोठामा ढोका खोलेर छिर्छन् । त्यो भिडियोमा यो त तपाई हो नी भन्दा हो म भन्छन् । फिल्मी स्टाईलमा आएको छु म हेर्नुहोस् भन्छन् । त्यसपछि उनी हतासमा आउँछन् ।
यो पुरै आइडीया वाला हो भन्छन् । त्यसपछि उनी निर्धक्कसाथ भन्न थाल्छन् । म मन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि हामीसँगै बसेका थियौँ त्यो कोठामा । मैलै करणी गर्नै पर्दैन्थ्यो । कुरा बुझ्नु भा छ ?
यो के भन्या होला मन्त्रीले । उसले मेरो भाडा माझ्ने, कोठा सफा गर्ने, ओछ्यान लगाईदिने, कपडा धोइदिने गर्थी । कुरा बुझ्नु भयो । हो कहिलेकाही धाप लगाउँथे । सँगै बसेको मान्छेलाई मैले त मज्जाले ललाई फकाईपनि गर्न सक्थे । जोरजुलुम गर्नै पर्दैन थ्यो ।
हैन भिडियोमापनि सहमति नै देखिन्छ जोरजुलुम त छैन नी पत्रकारले भन्दा अलगै छ भन्छन् । महिलाको श्रीमानले मन्त्रीसँगको सम्बन्ध थाहा पाएपछि बारम्बार बार्गेनिङ्ग गरेको देखिन्छ । दुई बर्ष अघि देखि नै सम्बन्ध भएको देखिन्छ । त्यसपछि श्रीमानले मन्त्रीलाई बार्गेनिङ्ग गर्दै कमाउन सक्ने योजनाहरु हाल्न लगाएको देखिन्छ ।
यो बर्षपनि महिलाको श्रीमानले ६ वटा कमाउने योजना मागेका थिए । त्यो मन्त्रीले दिन नसकेपछि यो खेल सुरु भएको बुझिन्छ । हुम्लाका ६ वटा योजना हालिदिनु भनेको छ भिडियोमा मन्त्रीले गोप्यता खेलेको सुनिन्छ । उनले नैतिक रुपमा चुकेको भिडियोमा स्वीकार गरेका छन् ।
उनले पत्रकारसँग यो भिडियो बजाउने नै अवस्था आयो भने चै हेर्नुहोस् म राजीनामा दिन्छु भनेका छन् । सरकारमा नै भएको बेला भिडियो बजाईदिनुभयो भने समस्या हुन्छ पछि बजाईदिनु बहस गरौँला भन्छन् । त्यसपछि भिडियो लिएर पत्रकारको टीम प्रहरी कार्यालय पुग्छ । त्यहाँ प्रहरीले मन्त्री नैतिक रुपमा चुकेको भएपनि आफूहरुले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिन्छन् ।
भिडियो लिएर फर्किदै गर्दा विभिन्न व्यक्तिले श्रीमानलाई चेतवानी दिन छाल्छन् । रविको मान्छेलाई भिडियो दिएको छस् रे अब बाँच्दैनस् सम्म भन्छन् । त्यसपछि महिलाका श्रीमानलाई बेपत्ता बनाईन्छ । महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई नै बेपत्ता बनाएपछि बयान फेरेकी छन् ।
उनले आफूलाई करणी नभएको बयान दिन थालिन् । प्रहरीले बन्धक बनाएर राखेका श्रीमानको उद्धार गर्छ र बेपत्ता बनाउनेलाई पक्राउ गर्छ । त्यसपनि श्रीमान–श्रीमती नै भएर पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमा करणी नभएको र कुनै अन्याय नै नभएको आफू र मन्त्रीलाई बदनाम बनाउने खेल मात्र भएको दावी महिलाले गर्छिन् ।
श्रीमानलेपनि आफ्नी श्रीमतीसँग कुनै अन्याय नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा नै श्रीमानपनि बोल्छन् । त्यसपछि मन्त्री शाहीले नै भिडियो इडिट गरेर चरित्रहत्या गरेको भन्दै अब कानूनी कारबाहीमा जाने दावी गर्छन् ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराई अचानक अस्वस्थ, अस्पताल भर्ना